webmaster – Page3– HI Burma
by webmaster 16/04/2022
16/04/2022 109 views
“ မြန်မာပြည်အာဏာသိမ်းမှုက ကျမတို့လိုပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်နေသူတွေပါထိခိုက်ခဲ့တာပေါ့။ ဘာလို့လဲဆိုဒီမှာလည်း ကိုဗစ်ကြောင့် အလုပ်မရှိလို့စိတ်ဓါတ်တွေကျနေရတဲ့အထဲ အိမ်ကငွေတောင်းလို့မပေးနိုင်ရင် ပိုပြီးစိတ်ဆင်းရဲရတယ်။ အဲ့ အချိန်တွေဆိုသေချင်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်”
မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေတဲ့ ဆီဆိုင်က စစ်ရှောင်တွေ
by webmaster 15/04/2022
15/04/2022 126 views
“ ငတ်လည်းငတ်ခါနီးနေပြီ၊ ကျွန်မတို့မှာ ဘာတွေထပ်ပေးဆပ်ဖို့လိုသေးလဲ အိမ်လည်းကုန်ပြီ ဘာများကျန်ဦးမှာလဲ”
by webmaster 14/04/2022
14/04/2022 99 views
“ဒီကာလမျိုးမှာ အပျော်ရှာဖို့လည်း စိတ်ကူးလို့မရဘူး။ ပျော်လည်း မပျော်နိုင်ဘူး။ ပေးဆပ်အနစ်နာခံသူတွေကို စာနာကြောင်းပြဖို့ ကိုယ့်အိမ်မှာပဲ ကိုယ်နေလိုက်တော့မယ်”
by webmaster 13/04/2022
13/04/2022 155 views
“တတိုင်းပြည်လုံးစိတ်ညစ်ပြီး ဒုက္ခတွေရောက်၊သောကတွေရောက်နေချိန်မှာ သင်္ကြန်ကို အစစ်အမှန် ပျော်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သွေးစွန်းသင်္ကြန်မှာလည်း မပျော်ချင်ဘူး”
by webmaster 12/04/2022
12/04/2022 103 views
” အခုလိုဖြစ်တာ ဖမ်းမယ့်သူမရှိလို့ပါ တာဝန်ရှိသူတွေက မဖမ်းဘဲလွှတ်ထားတာကြောင့် လုယက်တာတွေရိုက်နှက်ခံရ တာတွေဖြစ်နေတာ”
by webmaster 11/04/2022
11/04/2022 123 views
“သတိရလည်း ဖုန်းလေးနဲ့ပဲ အလွမ်းဖြေရတယ်။ ငါ့သား ပညာသင်နေတာ ပျော်ရွင်နေတယ် သားနဲ့ တွေ့ရမယ့် ရက်ကို ရေတွက်နေမိတယ်”
by webmaster 10/04/2022
10/04/2022 148 views
“Research and the Bible do not say that women should not be ordained. There isalot of information. Women around the world have been ordained as pastors for several hundreds of years. In Myanmar, other Christian conventions have been giving that for decades. In Kachin, it has not even reached zero.”
by webmaster 09/04/2022
09/04/2022 116 views
ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ဘုရားဖြူရှိ စစ်ရှောင်စခန်းဆိုလျှင် ဇန်နဝါရီလအစောပိုင်းမှာ စစ်ရှောင်ဦးရေ နှစ်သောင်းကျော်တဲ့ အထိ ရှိခဲ့ပါတယ်။ စစ်ရှောင်တချို့တွေဟာ နေအိမ်ကို ပြန်သွားကြတာလည်း ရှိတာကြောင့် လက်ရှိမှာ ထိုစစ်ရှောင်စခန်းမှာ လူဦး ရေ လေးရာအထိ ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။ ထိုစစ်ရှောင်စခန်းကို HI က ရောက်ရှိခဲ့ပြီး စစ်ရှောင်တွေရဲ့ အခက်အခဲကြားက နေထိုင်မှုတွေကို လေ့လာမိခဲ့သလောက် ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
စစ်ကိုမုန်းလို့တိုက်နေတဲ့ စစ်ဆန့်ကျင်ရေးသမား အမျိုးသမီးသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်
by webmaster 08/04/2022
08/04/2022 1880 views
“တခါတရံ ရဲဘော်တွေက အနစ်နာခံပေးချင်တာ၊ စစ်မေတွေကို အကာအကွယ်ပေးချင်တာ၊ ဦးစားပေးချင်တာ တွေ့ရတယ်။ အမြဲတမ်းကြုံရလေ့ရှိတဲ့ စိန်ခေါ်မှုကတော့ အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေထက် ယုံကြည်မှုတစ်ခုရဖို့ ပိုပြီး သက်သေပြရတာပဲ။”
by webmaster 07/04/2022
07/04/2022 131 views
“အနီးပတ်ဝန်းကျင်က လူပွဲစားတစ်ဦးက တရုတ်တွေနဲ့ လက်ထပ်ရင် ငွေနှစ်ဆယ့်ငါးသိန်း ရမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။ မွဲပြာကျနေတဲ့ မိဘနှစ်ပါးအတွက် ကိုယ်ပိုင်အိမ်တစ်ဆောင်ရမလားဆိုပြီး စွန့်စားခဲ့တာ။ မောင်လေးကျောင်း ထားနိုင်ဖို့လည်း လိုသေးတယ်လေ”